Ahia dika Mama Blogger | Martech Zone
Wenezde, August 12, 2009 Sunday, October 4, 2015 Chris Lucas kwuru
Mama ndị na-ede blọgụ
nwere nọ na akụkọ n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na ha na-achọsi ike inweta ngwa ahịa na ego ndị na-eso ezigbo ụmụnwaanyị.
Ihe na - eme ka ndị na - ede blọgụ nne dị otu a na - achọ otu ndị PR na ndị ahịa ya bụ na ha nwere ike ịchịkọta ọtụtụ ụmụ nwanyị (ọkachasị), tụkwasịrị obi n’ihe ha na - ekwu, wuo onwe ha dịka ndị ndụmọdụ tụkwasịrị obi, ma mara ihe obodo ha chọrọ. Yabụ, gịnị ka ndị ahịa na-amụta site na ndị na-ede blọgụ mama?
Nwee obi ọmịiko:
Enweghi ike ime ka ochicho obi ndi nne na-ede blọgụ gha eme ya. Blọọgụ kachasị aga nke ọma bụ nke ewulitere site na oke agụụ maka ihe onye edemede ahụ nwere, ezinụlọ ha, ọrụ ha na ezinụlọ ha, wdg. 37 Mgbama emeela nnukwu ihe na-esochi agụụ ha maka ngwanrọ dị mfe, dị irè.
mgbasa Ozi Nyochaa emeela nnukwu ngwa ahịa email na-enwe agụụ nke ozi ịntanetị nke ọma. Ihe obula ochicho gi bu, mee ka o bia na ahia gi ma cheta, ndi ahia gi nwere ike igwa ezi obi site na ihe emeputara!
Ijikọta ndị na-agụ akwụkwọ ha bụ ihe ndị na-ede blọgụ mama na-eme nke ọma. Ha maara ihe bọtịnụ ị ga-akwali na otu esi eme ka ndị na-agụ ha mee ihe n'ihi na ha nwere njikọta. O doro anya, ọ bụghị ndị na-ere ahịa niile nwere ike ịnwe njikọ pụrụ iche dịka nne na ndị ahịa ha, mana ha nwere ike ịchọta ụdị njikọ njikọ nkịtị.
Dị ka onye na-ere ahịa ịkwesịrị ịghọta ihe ndị ahịa gị chọrọ na otu ị nwere ike isi jikọọ na ha. Ma ọ bụ site na a mfe online nnyocha e mere, ma ọ bụ site na ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị dị ka Social Media, ịchọta ụzọ isi jikọọ na ndị ahịa gị dị oké mkpa n'ụwa taa nke ịzụ ahịa otu n'otu.
Rally maka ihe kpatara ya:
Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ nne na-agbakọta maka ihe kpatara ya. Ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụ Kuki Scout Nwaanyị. Dịka azụmaahịa enwere ike ịhụ agụụ gị site n'ihe ị kwenyere. Ma ị nwere okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ ihe kpatara ngwa ọrụ dị mfe, dị irè karị, ị nwere ike ịnakọta ndị ahịa gị na ndị ahịa gị nwere ike ime ka ha bụrụ ndị na-akwado akara gị wuru gburugburu nkwenye ndị ọzọ.
N'okwu a, Salesforce ghọrọ onye a maara dị ka No Software CRM ma ugbu a na-etu ụlọ ọrụ 59,000 dị ka ndị ọrụ nke ngwọta ha. Ha pụta na-agbanye imegharị ihe atụ CRM agbakwunyere na sava ụlọ ọrụ yana democratized CRM site na ikwe ka ị banye na nchekwa data gị ebe ọ bụla n'ụwa.
Ethos wuru ụdị mmiri n'akụkụ ihe kpatara ya - mmiri dị ọcha maka ụmụaka - ma nyere ya aka inweta nkesa Starbucks. Mgbe ịzụrụ Ethos ị na-azụ ya maka nkwenye na ụmụaka kwesịrị inwe mmiri dị ọcha. Branddị gị kwesiri iguzo maka ihe ka ọ pụta, mana cheta ma ọ bụrụ na ị kwụrụ maka ihe niile ị nweghị ike iguzo maka ihe ọ bụla